Waqti badan ayaan ku luminayaa baraha bulshada. Inta udhaxeysa algorithms cilladaysan iyo khilaaf ixtiraam la'aan, waqtiga yar ee aan ku qaato warbaahinta bulshada, waan faraxsanahay. Dadka qaar oo aan la wadaagay qanacsanaanteyda ayaa ii sheegay inay khaladkeyga tahay. Waxay igu yiraahdeen waa wadahadalkeygii furanaa ee siyaasada sanadihii ugu dambeeyay ee albaabka furay. Runtii waxaan aaminsanahay daahfurnaanta - xitaa hufnaanta siyaasadeed - sidaas darteed aniga